नीलो आँखावाली सुन्दरीः जसको आँखा र हट फिगरले संसार लोभिन्छ, हेर्नुहोस् २० फोटो, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
नीलो आँखावाली सुन्दरीः जसको आँखा र हट फिगरले संसार लोभिन्छ, हेर्नुहोस् २० फोटो
काठमाडौं। अमेरिकी रोमानियन अभिनेत्री ओना ग्रेगरी अहिलेसम्म कैयो टिभी सिरिज गरिसकेकी छिन् । २३ वर्षकी यी सुन्दरीलाई उनको डिज्नी असाइनमेन्टका लागि सबैभन्दा धेरै चिनिन्छ । द वाल्ट डिज्नी कम्पनीका लागि काम गर्ने ओना पलिो रोमानियन पनि हुन् । उनले इन्स्टाग्राममा शेयर गरेका फोटोहरु हेर्दा लाग्छ मोडलिङ उनको जन्मसिद्ध गुण हो । अभिनयको सपा पूरा गर्न ओना १३ वर्षको उमेरमा लस एन्जल्स गएकी थिइन् । अहिले सामाजिक संजालमा उनका हट फोटोहरु चर्चाको विषय बनेका छन् । हेर्नुहोस् ओनाका २० हट फोटोहरु